Ghost Windows XP Pro SP2 Gold Edition - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Applications, Operating Systems & E-books » Operating Systems » Windows XP
Ghost Windows XP Pro SP2 Gold Edition
Windows XP Windows XP များသီးသန့်တင်ပေးသည့်နေရာဖြစ်ပါသည်
ကဲ့ လာပြန်ပြီလား ဒီ Ghost .....
Windows XP လေးပါပဲဗျာ..ဘာမှမထူးပါဘူး...သူ့ရဲ့ အားသာချက်က Drivers တွေကို အပင်တပန်း ရှာစရာ မလိုတာရယ်၊
Drivers တွေ Install လုပ်တာကောမှ နာရီဝက်(မိနစ် ၃၀)ပဲ ကြာတာပါပဲဗျာ
Drivers ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဆောင်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ
Install လုပ်နည်းကလည်း ရိုးရိုးလေးပဲဗျ..ဘယ်သူ့ကိုမှ ငဝိုင်းပေးပြီး တင်ခိုင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ
Install လုပ်မယ်ဆိုရင် CD ထည့် ပတ်လမ်းပေးပြီး ကြိုက်ရာကီးနှိပ်ခိုင်းလို့ နှိပ်လိုက်ရင် ပုံ(၂) မှာပြထားသလိုမြင်ရပါမယ်
နံပါတ်(၂)ခုမြောက်ကို2(သို့)Arrow Key နဲ့ ရွေးလိုက်ရင် ပုံ(၃) ကလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
၁၀၀% ပြည့်သွားပြီး အော်တို restart ကျပြီး ပြန်တတ်လာရင် ပုံ(၄)လို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
Drivers တွေကို Install လုပ်နေတာပေါ့..Found New Hardware ဆိုတဲ့ Box လေးတတ်လာရင် Next,Finish ပေးပြီးစောင့်နေလိုက်ပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒါတွေ အကုန်ပြီးရင်တော့ လက်တင် အသုံးပြုလို့ရမယ့် ပုံ(၅)ကလိုလေး မြင်ရမှာပေါ့ဗျာ
ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေရင်လည်း အော်ခဲ့ကြပေါ့နော့်
Last edited by Myo Min Zaw; 24-01-2010 at 02:13 AM.. Reason: ပုံပြန်တင်
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဒဿဂီရိ, လူလေးငယ်, အောင်ခမ်း, ဖြိုးခန့်, phoetharlay, phyomyintthein, runner.zaw, thurein, tu tu
ပို့စ် 24 ခုအတွက် 50 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Ghost Windows XP Pro SP2 Gold Edition
ကျွန်တော်တော့ တင်ကြည့်လိုက်ပြီ.. ယခုလက်ရှိထိတော့ အဆင်ပြေနေပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
install လုပ်ပြီးလို့ ပုံ(၄)လိုမတက်လာဘဲ ပုံ(၂)လိုဘဲပြန်တတ်လာရင်တော့ .. အပေါ်ဆုံးက Boot From Harddisk ဆိုတာကို ပြန်ရွေးပေးပို့လိုပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော့် စက်မှာ တော့ အဲလိုပြန်လုပ်ပေးရတယ်.. ကြုံလာနိုင်တဲံ့ ညီအကိုများ အတွက် ထပ်ဖြည့်ပြီးပြောပေးတာပါ.. ကိုမျိုးမင်းဇော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကလည်း ဝင်းဒိုးအသစ်ဆိ်ု၇င် တင်ကြည့်ရမှ ကျေနပ်တာဆိုတော့.. အခုလိုရှယ်ရာပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
[SIGPIC][/SIGPIC][COLOR="Blue"]လွမ်းဆွတ်မှု[/COLOR] နဲ့ရပ်တည်နေမှုဟာလည်း [COLOR="Blue"]ဘ၀ [/COLOR]ပါဘဲ...:5:
Last edited by tu tu; 12-01-2010 at 08:28 PM.. Reason: remove quote
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ poutsi အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by poutsi
Medirefire က block လုပ်*ထားလို့
ifile (or) Rapidshare နဲ့်ရဖစ်*်ရဖစ်*်ရပန်*တငိပေးပာဗ်ယာ
Last edited by tu tu; 12-11-2010 at 05:12 PM.. Reason: edit quote
အကိုရေ ညီ ပြင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အကို
Mediafire က မြန်မာနိင်ငံတွက် အဆင်ပြေလို့ မလို့ ဖိုရမ်မှာ အများစုက တော့ ဒီဆိုဒ်ကနေပဲ့ တင်
ကြတာများပါ ကိုမျိုးမင်းဇော်က လည်း မြန်မာနိင်ငံကို ပြန်သွားပီ မလို့ အကိုကြီးအစား
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖြိုးယံလေး, phoetharlay, runner.zaw, tu tu
Many Thanks pr Nyi Lay.........
i can not download, so you can free time upload ifile site again.
megaupload and mediafire are access denied.
Find More Posts by thunge
ကို thunge ရေ ...
အပေါ်ကလင့်တွေ ကောင်းပါသေးတယ်ဆိုပြီး သေချာစစ်မိမှ အပေါ်က ကိုနေဦးသစ် တင်ပေးတာ Part_1 တစ်ခုတည်း megaupload နဲ့ဖြစ်နဲ့တာကိုး ကျနော် အကုန်လုံးကို multiupload နဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ifile လဲပါပါတယ်။ 50 MB စီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေရာ dl လင့်ကနေ ရယူပါ
စုစုပေါင်း 699 MB
hjsplit ဖြင့် ပြန်ဆက်ပါ။
Credit to Myo Min Zaw
Request: မူလ လင့်မှာ နောက်လူတွေ အဆင်ပြေအောင် ခုအပေါ်က လင့်လေးတွေ ဖြည့်ပေးပါဦး ခင်ဗျာ ...
kyaukphyu, phoetharlay, zo
အဆင်ပြေလို့ရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး Ghost Windows XP Pro SP2 Gold Edition ပြန်တင်ပေးပါခင်ဗျာ....အပေါ်ကလင့်လေးတွေက ဒေါင်းတာမရလို့ပါ...
Last edited by 11mintharlay; 14-06-2015 at 07:48 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ 11mintharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by 11mintharlay
15-06-2015, 10:26 AM
ghost xp pro sp2 gold edition ကိုတော့ ရှာလို့မတွေ့ဘူးဗျ။
ဒါပေမယ့်လို့ xp pro sp3 ကိုတော့ တွေ့တယ်ဗျ။
တကယ်လို့ sp3 နဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တချက်ပြန်ပြောပေးပါလားဗျာ။။
19-06-2015, 06:17 AM
xp pro sp3 က ဂို့စ်ထ် စီဒီဆိုရင်တော့ သုံးကြည့်ပါမယ်။ အဆင်ပြေလို့ရှိရင် ပြန်တင်ပေးပါဦး။ ကျေးဇူး...........
19-06-2015, 06:54 AM
၁။ WINS XP PRO SP2 original with key
ဒီတခုကိုတော့ mediafire မှာ 50MB စီခွဲပြီး တင်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ။ စုစုပေါင်း အပိုင်း၁၁ပိုင်းနဲ. 500MB ကျော်လေးရှိပါတယ်။ rar ဖိုင်နဲ့ဖို့ ဖိုင်ကိုဖြည်ဖို့ password ကတော့- www.MYANMARFAMILY.org ကိုသုံးပေးပါ။
၂။ WINS XP PRO SP3 (Jan 2015 with SATA Drivers)
၃။ WINS XP PRO SP3 (32bit)
ဒီ၃ခုထဲမှာ အကိုလိုတာများရှိခဲ့ရင် ပြန်ပြောပေးပါဗျာ။ ဒီအတိုင်းအကုန်တင်ဖို့ကျတော့ မလိုတာကြီး ဖြစ်မာစိုးလို့ပါ။
Last edited by zo; 19-06-2015 at 08:17 AM..
Windows7ghost CD Myo Min Zaw Windows735 13-01-2011 10:56 PM
Windows XP Professional SP3 Ultra Edition 2009 Genuine ကျန်စစ် Windows XP608-06-2009 09:21 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 10:28 AM